SIDA LOO DAAJIYO DOOFAARKA: TALADA UGU WANAAGSAN EE CUNTOOYINKA - XOOLAHA
Qolalka, khayraadka iyo xamaasada, aad bay u fududahay in guriga laga soo qaado doofaarro.
Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii aad samaysay go'aankaas, marka hore waa inaad ka taxadartaa waxa aad ku quudineyso xayawaankaaga. Ka dib oo dhan, inkasta oo xayawaankani aanu ku dhaafeynin quudinta la siiyay, haddii aad rabto inaad hesho natiijo sare, waa inaad si taxadar leh u sameysaa cunto.
Qodobka hoose, waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa waxa nuujinta ugu haboon ee doofaarka, iyo habka naasku u gaari karo wax soo saarka ugu sareeya.
Waxaan sidoo kale ka sheekeyn doonaa farqiga u dhexeeya cunto ee doofaarrada yaryar, shakhsiyaadka qaangaarka ah iyo cows.
Iskuullada quudinta doofaarka: alaab qiimo leh oo loo adeegsado tan
Caadi ahaan doofaarka waxaa lagu quudiyaa qashinka cuntada iyo qudaarta la kariyey. Guud ahaan, cuntada noocaas ah ayaa la aqbali karaa xayawaankaas, laakiin ma awoodid inaad si degdeg ah oo karti leh kor ugu qaaddo shakhsi. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo tiknoolojiyada kala duwan ee quudinta degdegga ah, oo ay ku jiraan quudin dheellitiran iyo fitamiino kala duwan.
Mid kasta oo ka mid ah kiisaskaas, waxaa haboon in la tixgeliyo isbeddellada jidhka doofaarka. Xaqiiqdu waxay tahay in xayawaankani ay leeyihiin hal caloosha qolka, sidaas awgeed, waxay ka duwan tahay lo'da, waxay dheef dhoobaan oo ay ku jiraan quudinta wax ka sii adag.
Marka la eego, ka koobnaan cagaarka suunka ah ama quudinta waa inay ahaataa mid yar oo ka mid ah cuntooyinka guud ee doofaarka, inta badan waxay u qalantaa isticmaalka quudinta xoogga leh. Dhamaadka dambe way fududahay oo ugu fiicnaanshaha jidhka xayawaanka, si wanaagsan u saameeya sida ay u noqon doonto miisaanka nool.
Nooca quudinta si uu u siiyo doorbidid, mid kasta oo breeder ayaa go'aan ka gaaraya madax-bannaan, inkastoo ay jiraan laba doorasho oo waaweyn:
Quudinta caadiga ah ee quudinta, taas oo ku lug leh isticmaalka mash.
Xaaladdan oo kale, waxay isticmaalaan dhammaan noocyada qashinka cuntada, khudradda, baradhada khaas ah ee la kariyey, miro iyo caws (labadaba cagaaran oo la jarjaray).
Quudinta qalalan ee doofaarrada, taas oo ku salaysan isticmaalka noocyo kala duwan oo isku dhafan. Ku
Waxay sidoo kale ku daraan burka, cake, fitamiin iyo macdanta macdanta.
Xaaladdan oo kale, waa muhiim inaad xoolaha siiso xaddiyo badan oo biyo ah, haddii kale waxay si aad ah ugu xanuunsan doonaan calool-fadhiga, miisaankuna wuu yareeyaa.
Kuwa ugu badan ee soo saaraha doofaarka casriga ah ayaa doorbidaya habka labaad, taas oo muujineysa in ay tahay shaqeyn xoog badan oo wax ku ool ah.
Marka hore, uma baahnid inaad kobciso doofaarka dhawr jeer maalintii oo aad ku qaadatid barniga la shiiday ee baaldiyada culus.
Shaqadaada kaliya ayaa noqon doonta hore u burburinta hadhuudhka, ku dar dhammaan qaybaha dheeraadka ah iyo ku shub qaddarka loo baahan yahay ee xayawaankaaga xayawaankaaga.
Marka labaad, quudinta noocaas ah, waxaa jiri doona ficil la'aan qolka, iyo meeshii digada lafteedu waxay leedahay awood dheeri ah oo lagu kala saari karo qaybaha dabiiciga ah, taas oo ah, inay noqoto bacriminta dhirta.
Haa, iyo sida horay loo soo sheegay, quudinta noocaan oo kale ah ayaa aad uga sii fiicnaanaya koritaanka doofaarrada yaryar, siinta fursad ay ku helaan hilib waqti gaaban. Sidaa darteed, haddii aadan u baahnin doofaarka sida macaamilka qashinka, ikhtiyaarka ah quudinta maaddooyinka qalalan ayaa faa'iido u leh dhammaan qorshayaasha.
Ka doodista sifooyinka fitamiinada
Sida qof, sida doofaarka koritaanka caadiga ah waxay u baahan yihiin cunto buuxa oo buuxa, oo aan ka fogayn fitamiinada. Waxaan u maleyneynaa in cidna la yaabi karin in la ogaado in la'aanta fitamiin jirka ee jirka xayawaanka ay sababi karto hoos u dhac difaac ah, ka sii daraysa koritaanka xayawaanka, bacrimintooda, iyo xaalado dhif ah - dhimasho.
Laakiin ha u maleynin in ilaha fiitamiinadu ay noqon karaan kuwo gaar ah. Waxaa laga heli karaa alaabooyinka caadiga ah, meesha ugu horeysa ee la qaadan karo cawska cagaaran. Waxay hodan ku yihiin carotene iyo kooxaha ugu muhiimsan ee fitamiinada.
Haddii xagaaga cawska iyo cagaarka kale waxaa la siin karaa cusub, ka dibna jiilaalka waxaa haboon in la isku diyaariyo sidii silo. Hay ayaa sidoo kale la siin karaa, laakiin waxay lumisaa inta badan sifooyinka cawska cagaaran.
Ilaha wanaagsan ee fiitamiinada ee loo baahan yahay doofaarka waa cirbado iyo qallalan la qalajiyey.
Aad bay muhiim u tahay in lagu daro cuntada iyo noocyada cas ee dabacasaha.
Isticmaal wanaagsan oo ku saabsan xaaladda guud ee jidhka iyo isticmaalka cuntada, biirka ama kalluunka rooti, ​​taas oo si buuxda u qancin karta baahida jidhka ee fitamiin B. Ilaha qiimaha fiitamiinku waa dhammaan caanaha, sidaas darteedna caano cusub ayaa muhiim u ah dadka dhalinta yar.
Xilliga xilliga qaboobaha, marka xayawaanku isticmaali karaan khayraadka jirkooda si ay u adkeeyaan qabowga, Cuntadu waa inay ahaato mid taajir ah oo caafimaad leh. Sidaa darteed, waxaad isticmaali kartaa fitamiino gaar ah, oo ay ku jiraan saliidda kalluunka. Waxay ka mid tahay ilaha ugu caansan fitamiinnada kooxaha A iyo D.
Sidoo kale, diirada khaaska ah ee fitamiinada A iyo B waxaa badanaa loo isticmaalaa xayawaanka.
Cunno noocee ah ayaa ku dhici karta doofaarka iyo sida loo cuno si sax ah?
Dad badan ayaa ka fikira doofaarka. Qayb ahaan, tani waa run, laakiin wali waxaa jira tiro ah dhibaatooyin ah oo loo baahan yahay in la tixgeliyo marka la quudinayo xayawaanka:
Grain waa ka fiican tahay in la siiyo xayawaankaas foomka dhulka. Doofaarka oo dhan ayaa sidoo kale la cuni doonaa, laakiin ma noqon doonto mid gebi ahaanba dheefshiido, maadaama xayawaanka uusan awood u laheyn inuu si buuxda u helo.
Waxaa sidoo kale faa'iido leh in la isticmaalo hadhuudhka dhulka laga eego dhaqaalaha aragtida, maaddaama qaabkan kharashku uu noqon doono mid aad u yar oo xayawaanka ayaa buuxsami doona.
Iyada oo quudinta dhaqameed, baradhadu waa cuntada ugu muhiimsan ee doofaarka. Si kastaba ha ahaatee, u siinta xayawaanka sida aan u qalmin qeydhin, maadaama ay waxyeellayn karto.
Xididkan waa in la kariyaa, kadibna si fiican u dhaqo. Sidoo kale, biyaha sii wadi ka dib karinta baradho laguma talin karo isticmaalka quudinta.
Siinta khudradda cagaaran ee qaabka cayriinka waa suurtogal keliya oo keliya sida fitamiinada yar oo tiro yar. Oo weliba, mid baradho ah waa in aan loo isticmaalin, waxaa fiican in lagu daro xididdo, bagalka. Qaybo badan oo noocyadaas oo kale ah ayaa la bixiyaa oo kaliya foomka welded.
Waxyaabaha khatarta ah ee doofaarka ayaa sidoo kale ka falceliya si xun.. Gaar ahaan si taxadar leh waxaad u baahan tahay inaad tixraacdo silo, oo aadan u oggolaanin inaad jajabiso ama leexiso, caaryada.
Dhammaan tani waxay keeni kartaa horumarinta cudurrada bakteeriyada iyo cudurada viral ee xayawaan, waxaa suurtogal ah in caabuq laga helo hilibka iyo bini-aadanka.
Waxyaabaha ay tahay in had iyo jeer lagu daro cuntada ee doofaarrada
Marka quudinta doofaarrada ah waa mid aad u muhiim ah ma aha oo kaliya in la doorto alaabta saxda ah, laakiin sidoo kale tirada.
Haddii aad siisid xayawaan aad u weyn - tani waxay u horseedi doontaa korodhka culeyska degdegga ah, cuntadu weli waxay ku jireysaa xeeladda.
Wixii quudinta ku xigta, waa in aan la isticmaalin, sababtoo ah cuntadii khasaare soo gaartay waxba uma tarin xayawaanka. Si aysan alaabtu u baaba'aan, tan weli waa la quudin karaa ducks ama turkiga, cunnooyinka noocan oo kale ah waxay u imaan karaan inay dhadhamiyaan digaagga.
Waa lagama maarmaan in lagu daro hadhuudhka cuntada ee doofaarka. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo xaqiiqda ah in ay hodan yihiin carbohydrates, ma haystaan ​​borotiin ku filan. Marka la eego arrintani, waa lagama maarmaan in cuntada laga dhigo mid kala duwan, iyada oo lagu darayo miraayada dhadhanka, iyo caanaha, iyo caanaha khudradda.
Faa'iidada doofaarka waxay noqon doontaa hilibka iyo lafaha cuntada ama cunto kalluunka, keeg, dib u noqosho.
Guud ahaan, qaybaha kuwaas oo buuxin kara badeecadaha jidhka xoolaha, waxaa loo qaybin karaa kooxaha soo socda:
Qaybaha awood u leh in ay jidhka siiyaan tamarta xayawaanka. Waxaa laga helaa miro, hadhuudh iyo dufan.
Waxay ka koobanyihiin tiro badan oo ah borotiinka tufaaxa, kufsiga, burka qorraxda, hilibka iyo lafaha, cunnada dhiigga iyo cunto kalluunka, digir, gogol, lupin macaan, digir, khamiir.
Succulent quudiya sida baradhada, kaabajka, xididdo iyo geedo yaryar (silage). Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo ay faa'iido u leeyihiin, way adagtahay in la dheefshiido, sidaas darteed, dhallinyaradu waa in la siiyaa quudin wanaagsan oo leh quudin.
Qaybaha kale. Kooxdani waxay caado u tahay in lagu daro noocyada kala duwan ee qashinka cuntada, qashinka ka yimaada warshadaha digaaga, dhirta wax soo saarka hilibka.
Noocyada quudinta doofaarka iyo faraqa u dhexeeya iyaga
Quudinta "faa ". Xaaladdan oo kale, digirta yar ayaa la siiyaa helitaanka joogtada ah ee cuntada. Troughs ayaa la nadiifiyaa 2 jeer toddobaadkii si looga hortago jadeecada aan duuduubnayn ee ka soo baxa qadiimooyinkii hore ee ay ku urursanayeen. Margooyinkooda lama cuni doono.
Nidaamka noocan oo kale ah wuxuu ku haboon yahay dadka dhalinyarada ah, laguma talinayo in loo isticmaalo dadka waaweyn.
"Caadi ahaan" quudinta. Xaaladdan oo kale, doofaarka cuntada ayaa bixiya dhowr jeer maalintii. Isla mar ahaantaana, xaddiga cuntada waa in ay ahaato in xayawaanku xayiraan xayawaanka xitaa 1-2 saacadood ka hor inta aan la cunin adeegga soo socda.
Noocaan quudinta waxaa inta badan loo isticmaalaa quudinta doofaarka iyo doofaarka koraya.
"Xadidan" doofaarka quudinta. Nuxurka nidaamka noocan oo kale ah waa in la siiyo cunto kariska wax yar ka yar intii ay cuni lahaayeen. Isla mar ahaantaana, waxaad dhab ahaantii siin kartaa quudin yar, ama waxaad siin kartaa cunto nafaqo yar, adoo siinaya cuntada adag ee khudradda.
Haddii quudinta noocaas ah loo isticmaalo dukaamada dufan, laakiin hilibka laga helo iyaga ayaa noqon doona mid aamusan. Sidoo kale, noocyadan ayaa loo isticmaalaa in la cuno toobo uur leh, si aysan u helin dufan badan.
Xaaladaha quudinta ma aha dhammaantood waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan quudinta doofaarka. Waa muhiim inaad si taxadar leh u fiirsato waxyaabaha ay xayawaanku u baahan yihiin da'doodu kala duwan tahay. Ku saabsan arrintan hoose.
Cunto loogu talagalay da'da kala duwan ee doofaarka: qaybaha iyo tirada
Muuqaal muhiim ah oo quudinta doofaarka ma aha oo kaliya xulashada cuntada saxda ah, laakiin sidoo kale nidaaminta cuntada. Gaar ahaan, waxa ugu wanaagsan in la siiyo raashin xayawaan ah isla mar ahaantaana, beddeleysa tirada aqbalaadda iyadoo ku xiran da'dooda:
Beeraha uurka leh waxaa lagu quudiyaa hal mar maalintii. Isla mar ahaantaana, waa mid aad u muhiim ah in lagu daro raashin adag si ay u cunaan.
Cunnooyinka iyo kalkaalinta kalkaalinta ayaa badanaa la quudiyo, laba jeer maalintii.
Doofaarkii laga saaray beerta waa in la quudiyo ugu yaraan 3 jeer maalintii. Sidoo kale waxay quudiyaan doofaarrada kuwaas oo ku jira korinta iyo naaxinta.
Doofaarka la shiiday waxaa la siin karaa labo jeer oo raashin ah, iyo quudin adag ayaa loo isticmaali karaa midka saddexaad.
Doofaarrada sigaarka iyo quudinta
Si loo baro doofaarrada yaryar ee nuugista ah ee ay ku quudiyaan waa laga soo bilaabo maalinta shanaad, tan iyo xilligaas marka ay ilkaha bilaabaan in la gooyo.
Nooca ugu fiican, nidaamka ilkaha iyo qanjirrada salivary waxay kobcaan marka ay isticmaalaan badarka miraha ah ee digir, sarreen, galley, ama shaciir.
Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay qabaan cudurada caloosha oo ka yimaada quudinta, markaa ha iloobin in la siiyo iyaga acidophilic dhanaan caano.
Qaybaha isku dhafan oo leh qashin khaas ah oo loogu talagalay doofaarka ayaa si tartiib tartiib ah loogu daraa raashinka, ama fowdada, cuntada lafaha iyo dhuxusha ayaa loo isticmaalaa.
Maalinta 10-aad, waxaa mar horeba loo oggol yahay in la siiyo wax yar oo khudradda ka mid ah, ka dibna waxaa si fudud loo gooyaa karaa.
Waqti ka dib, waxaa loo oggol yahay in lagu daro raashin yar yar, bocor iyo silage isku dhafan, laakiin aad u yar. Marka uu gaaro seddex toddobaad oo da 'ah, doofaarku wuxuu awoodi doonaa inuu si buuxda u qodo iyo baradho la kariyey.
Ka fogow doofaarka ilmo-galeenka ayaa muhiim u ah 1.5 bilood jir. Waqtigaan, waxay u baahan yihiin inay bartaan sida si buuxda u cunaan si madaxbannaan, oo ka yar iyaga oo yareynaya hooyadooda.
Sidoo kale muhiim u noqo inaad tarjunto quudin qalalanTaasi waxay keenaysaa joojinta nuujinta. Qiyaas ahaan inta jeer ee lagu quudiyo doofaarka laga goosto, waxaan hore u hadalnay. Iyo cuntadu waxay u baahan yihiin inay ku daraan waxyaabaha soo socda:
Isku daridda diirada.
Caanaha (doorbidayaa caanaha).
Cunto fudud oo la xoojiyey - karootada, hay, silage.
Sidee si habboon u quudisaa boogaha?
Quudinta, ama ka sii kordhaya, ee daboolka waa shaqo aad u muhiim ah.
Xaqiiqdu waxay tahay in xilligaan muddadaas, ay kaliya sameeyeen lafaha ugu muhiimsan, iyo sidoo kale unugyada muruqa, taas oo markii danbe noqotay aasaaska lagu daadinayo dufanka.
Xilliga xagaaga, way sahlan tahay in iyaga lagu hayo daaqa, iyaga oo ku quudiya cawska yar, iyo Ku darista cuntada qashinka cuntada yar iyo fitamiin.
Waxaad iyaga ku quudin kartaa wax la mid ah maraqa: laba saacadood oo caadka ah kahor quudinta cawska isku qasan oo baradho kulul la kariyey iyo diirada. Muddadan, doofaarku waa inuu ka faa'iideystaa 20 ilaa 50 kiilo garaam.
Sida doofaarradu u daalaan si loo gowraco: qaybaha ugu muhiimsan ee cuntada loo baahan yahay
Marka doofaaradu gaaraan miisaankoodu yahay 50 kiiloogaraam, si firfircoon ayaa loo quudin karaa, si ay u helaan miisaanka jidhka oo keliya, laakiin sidoo kale tiro badan. Waxay socotaa 3 bilood iyo inta lagu jiro muddadani doofaarku waa in lagu quudiyo cuntooyinka sida ugu macquulsan ee nafaqada leh. Isla mar ahaantaana, waa in maskaxda lagu hayaa in cuntooyinka kala duwan ay saameynayaan tayada hilibka siyaabo kala duwan:
Haddii aad bixiso qashinka kalluunka - ku saabsan hilibka ayaa kallifaya kalluunka.
Waayo, doofaarka doofaarka, waxaa muhiim ah in la siiyo waxyaabaha caanaha, taas oo siinaya hilibka caraf udgoon.
Shimbiraha aan caadiga ahayn ee doofaarku waxay noqon doonaan marka xayawaanku ay bixiyaan baradho badan, suuf, miraha iyo burka.
Khudaarta cagaaran waxay ku sameeyaan dufan badan.
Soy iyo cake ayaa yareeya tayada hilibka doofaarka.
Dadka waaweyn ee quudinta - boarsada iyo cowska
Doomaha ayaa si dhakhso ah u helaya tiro badan oo dufan ah, sidaa darteed cuntada uu u baahan yahay waa mid si sahlan loo qaadi karo. Khubarada waxay ku talinayaan 75% cuntada daaqa cuntada ka soo jiidata. 10% kale oo cunto ah waa in ay noqotaa mid dheeri ah oo ka mid ah xayawaanka, iyo quudinta suuban ee kala duwan.
Legumes waxay sidoo kale muhiim u tahay dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah ee xayawaanka, sidaas darteed xajmigooda cuntadooda oo dhan waa inay ahaataa ugu yaraan 5%.
Kalluunka qamadiga ah, guluubka qashinka ah, miro, xididdo, dabacasaha iyo caanaha dufanka leh ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee daaqa u baahan yahay inay bixiyaan. Si aad u sameyso cuntada oo dhan sida ugu dheellitiran ee suurtogalka ah, ha ilaawin vitamininka dheeraadka ah.
Heerka ugu muhiimsan marka la beero quudinta xilliga geedka waa in lagu sameeyaa tayo sare leh iyo mid kala duwan. Tani waxay noqon kartaa caws cagaaran iyo silage, iyo dalagyo kala duwan.
Noocyo kala duwan oo kala duwan, dheellitirka macdanta, dhirta iyo hilibka iyo cuntada lafaha.
Aad bay muhiim u tahay in beertu aanay lahayn wax yar oo calcium ah, sababtoo ah mustaqbalka waxay weli dhalin doontaa dhalinyarada. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in lagu daro cawska caadiga ah ama nuugista cuntada.
Sidoo kale, waa wax aan la aqbali karin in bilaha ugu horeeya ee jilitaanka, quudinta waa mid aan loo baahnayn, tanina waxay sababi kartaa dhimashada embriyaha. Quudinta qaybta labaad ee dhididka waa in ay ahaato quudin dheeri ah oo dheellitiran. Qadarka guud ee quudinta 3-dii maalmood ee ugu dambeysay ka hor inta aan la furin waa in la yareeyo 30-40%.